Material: intsimbi / ingxubevange
Injongo: Izixhobo zokuhambisa umbane
Kwiintambo zefayibha ezibonakalayo ze-ADSS, ukuqiniswa okuzenzekelayo. Ukuvula ibheyile kulula ukuyifakela.
Onke amalungu akhuselekile kunye.
Izikhonkwane ezibambekayo (i-Anchor dead-end clamp) yeentambo ze-ADSS ACADSS ezijikeleze iintambo zefayibha ezifakwe kwizikhewu ezimfutshane (100m max) zenziwe ngeglasi enye evulekileyo yomzimba owomeleleyo, iperi zepheji zeplastiki kunye nebheyile eguqukayo, engatshiyo ngumlilo iplastikhi kunye nokutshiswa okungatshiyo komlilo okusetyenziselwa ukuxhasa nokukhusela ii-liners ezincinci. Uchungechunge lwe-ACADSS luqulathe iimodeli ezahlukeneyo zokubamba ezinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokubamba kunye nokumelana noomatshini. Olu bhetyebhetye lusenza sikwazi ukucebisa uyilo lwe-clamp olulungisiweyo kunye nolwenziweyo kuxhomekeke kulwakhiwo lwentambo ye-ADSS.
PAL Aluminium uxinzelelo uqinisa
Ubambo lwe-anchor luyilelwe ukumisa umgca ongaphezulu wokugquma kunye nabaqhubi be-4 ukuya kwiPole, okanye iilayini zenkonzo ezinabaqhubi aba-2 okanye aba-4 kwipali okanye eludongeni. Uqinisa luqulathe umzimba, iidges kunye nebheyile esuswayo kunye nehlengahlengiswayo okanye iphedi.
Enye yeekhonkrithi ze-Anchor ziyilo lokuxhasa umthunywa ongathathi hlangothi, i-wedge inokuzilungelelanisa. Ukuzivula ngokwakho kuboniswa ngokudityaniswa kwezixhobo zentwasahlobo zokufaka ngokulula umqhubi kwi-clamp.
I-NLL yohlobo lwe-strain clamp
Uxinzelelo lobambiswano lolunye udidi lwezixhobo ezithile zentshukumo ezazisetyenziselwa ukugqiba uxhulumaniso lwentambo kumqhubi okanye intambo, kwaye inika inkxaso ngoomatshini kwi-insulator nakwisiqhubi. Ihlala isetyenziswa ngokulungelelana njenge-clevis kunye nesokethi yamehlo kwimigca yokuhambisa ngaphezulu okanye kwimigca yokuhambisa.
Uhlobo lweBollet yoxinzelelo lwengxinano lukwabizwa ngokuba luvavanyo lokugqibela lokuxinana okanye uhlobo lwesigaxa se-quadrant.
Kuxhomekeka kwimathiriyeli, inokwahlulwa kubini kuthotho: NLL uthotho uxinzelelo uqinisa lwenziwe ngealuminium ingxubevange, ngelixa uthotho lweNLD lwenziwe ngentsimbi oluthambileyo.
Uxinzelelo lwe-NLL yoxinaniso lunokuhlelwa ngobubanzi babaqhubi, kukho i-NLL-1, NLL-2, NLL-3, NLL-4, NLL-5 (efanayo kuthotho lwe-NLD).
Ubambiso lokumisa luyilelwe ukunika abaqhubi bobabini ngenkxaso yomzimba kunye neyomatshini. Oku kubalulekile ngakumbi xa sele uzifakile izihambisi zomtya wokuhambisa umbane kunye neefowuni.
Ukurhoxiswa kwamasango kuphucula uzinzo lomqhubi ngokunqanda iintshukumo zabo ngakumbi ngokuchasene nomoya onamandla, isaqhwithi, kunye nezinye izinto zendalo.
Yenziwe ngentsimbi kwalenza, izibophelelo zokunqunyanyiswa zinamandla alungileyo okuxhasa ubunzima babaqhubi kwizikhundla ezifanelekileyo. Izinto ezinokumelana nokubola kunye ne-abrasion yiyo loo nto zinokusebenzela injongo yazo ephambili ixesha elide.
Izibophelelo zokurhoxiswa zibonisa uyilo lobuchule be-ergonomic eqinisekisa ukuba ubunzima bomqhubi buhanjiswa ngokulinganayo emzimbeni wecamp. Olu luyilo lukwabonelela ngeengile ezifanelekileyo zonxibelelwano kumqhubi. Ngamanye amaxesha, kongezwa izinto zokulwa ukuthintela ukuphakamisa komqhubi.
Ezinye izixhobo ezifana namandongomane kunye neebholithi zisetyenzisiwe kunye nezibophelelo zokumisa ukomeleza unxibelelwano nabaqhubi.
Unokuphinda ucele uyilo lwesiko lokunqunyanyiswa ukuze ulungele indawo yesicelo sakho. Oku kubalulekile kuba ezinye izikhonkwane zokumiswa ziyilelwe iintambo ezizodwa ngelixa ezinye zenzelwe iinyanda zabaqhubi.
Uqinisa i-NES-B1 yoxinaniso
Isixhobo siqukethe umzimba omkhulu, i-wedge kunye ne-ring kunye ne-pad yokuphakamisa kunye nokuhlengahlengisa.
Iklip ye-anchor ye-single-core yenzelwe ukuxhasa umthunywa womoya kwaye i-wedge inokuhlengahlengiswa ngokuzenzekelayo.
Izibophelelo zenziwe ngeepolymers ezinganyangekiyo zemozulu kunye ne-UV okanye imizimba yealuminiyam ene-polymer wedge cores.
Intonga yokuqhagamshela ehlengahlengiswayo eyenziwe ngentsimbi eshushu eshushu (i-FA) okanye i-stainless steel (SS).
NXJ Aluminium Tension Uqinisa
Uthotho lwe-NXJ ilulungele uxinzelelo lwe-clamp insulation ye-20kV yomoya ye-aluminium engundoqo yocingo i-terminal ye-JKLYJ okanye iziphelo ezibini zokulungisa kunye nokuqinisa ukugquma kwasemoyeni.
Aluminium ukunqunyanyiswa uqinisa
Ukurhoxiswa uqinisa ubukhulu becala kusetyenziswa iintambo amandla. Umqhubi wombane kunye nombane ohambisa umbane unqunyanyisiwe kwintambo yokwambathisa okanye umbane ophethe umbane unqunyanyisiwe kwipali yesixokelelwano ngokudibanisa izixhobo zetsimbi.